ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ ဩစတြီးယားနိုင်ငံသံရုံး စီးပွားရေးဌာနအကြီးအကဲ Mr. Mag. Gunther Sucher ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်၌တွေ့ဆုံ၊ e-ID စနစ် လုပ်ငန်းစီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး။ ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၈ ။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ဩစတြီးယားနိုင်ငံသံရုံးမှ စီးပွားရေး ဌာနအကြီးအကဲ Mr. Mag. Gunther Sucher ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား အောက်တိုဘာလ (၈) ရက်နေ့ ယနေ့နံနက် (၉) နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဩစတြီးယားနိုင်ငံတို့အကြား e-Government လုပ်ငန်းစဉ်၏ ရှေ့ပြေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သည့် e-ID လုပ်ငန်းစနစ်အတွက် ဆောင်ရွက်မည့် Unique ID ကောက်ယူရေးလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေ၊ ယင်းလုပ်ငန်း စဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအချင်းချင်း နားလည်မှုစာချွန်လွှာ(MoU) လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ရေးအတွက် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ဆက်လက် ဆောင်ရွက် မည့်လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အမြန်ဆုံးစတင်နိုင်ရေးအတွက် MoU စာချုပ် အပြီးသတ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေများ၊ လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကော်မတီအဆင့်ဆင့်တို့မှ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအခြေအနေများ၊ Unique ID ကောက်ယူရေး လုပ်ငန်းနှင့်အတူ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများ ရေးဆွဲတင်ပြနိုင်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အထက်အဆင့်ဆင့်သို့ ဆက်လက်တင်ပြဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) အချိန်မီတင်ပြ နိုင်ရေးနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများစနစ်တကျ ဖြစ်စေရေးအတွက် ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ e-ID လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် သြစတြီးယားနိုင်ငံမှ ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့် အစီအစဉ်များ၊ e-Government လုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မြန်မာ- သြစတြီးယားနှစ်နိုင်ငံ အစိုးရအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းများအမြန်ဆုံး စတင်နိုင်ရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။